Fanamarihana 10 andro fampidiran-doha amin'ny fambolena otrikaina - Ahoana ny fomba hamaliana izany
10 Andro fanamarihana momba ny tsy fahampiana
Inona no tokony hatao rehefa mahazo manamarika ny tsy fahampian'ny fampiharana amin'ny cannabis.
Nahazo mailaka avy amin'ny fanjakana ianao milaza fa misy zavatra tsy ampy amin'ny fampiharana rongony & manana 10 andro ianao hamaliana izany. The Fampandrenesana 10 andro cryptic sy mampisavoritaka. Mampiasa fepetra sy / na fiteny be dia be izy, ka sarotra ny hahafantatra tsara izay angatahiny amin'ny fangatahanao. Inona no ataonao? Milamina, tonga amin'ny toerana mety ianao. Eto amin'ny Cannabis Industry Lawyer.com, zanakay lahy Tom Howard mandrara ny lalàna rongony toy ny ampahany aminao. Raha mila fanampiana ianao dia mandefasa mailaka aminy [email voaaro]
FIVAVAHANA MISY: Ahoana ny fomba hanokafana dispensary cannabis any Illinois
FIVAVAHANA MISY: Ahoana ny fomba fivoarana ny orinasam-bary cannabis
Te hanampy ny raharaham-barotra amin'ny fiadiana azo antoka ianao
Inona no fanamarihana 10 andro momba ny tsy fahampiana amin'ny fampiharana an-tsaha?
Ny fanamarihana ny tsy fahampiana 10 andro dia zatra mazoto ataon'ny tompon'andraikitra amin'ny fisoratana anarana ny rongony. Ny fizotran'ny fampandrenesana 10 andro dia manampy amin'ny famongorana ireo ekipa sasany avy amin'ny fizotran'ny fampiharana rongony tena mifaninana. Noho izany dia mila mahazo antoka ianao fa hamaly tsara ny fanamarihana anao 10 andro. Azonao atao ny mandray ny iray amin'ireto fanamarihana momba ny tsy fahampiana amin'ny fampiharana rongony ataon'ny ekipanao amin'ny zavatra maro samihafa. Ity misy ohatra iray amin'ny sary iray karazana fanamarihana tsy fahampiana 10 andro.
Ity fanamarihana 10 andro ity dia tsy hoe tsy fantatra anarana amin'ny fampirantiana mety.
Ahoana ny fomba hamalianao ny fanamarihana 10 andro momba ny tsy fahampiana amin'ny fampiharana fatrany
Ireto misy dingana tsotra hamaliana ny fanamarihan'ny ekipanao ny tsy fahampiana mandritra ny 10 andro hahafahanao mamerina amin'ny laoniny ny fampiharana ny rongony.
milamina - manana 10 andro manomboka ny andro aorian'ny nahazoanao ny mailaka ianao - farafaharatsiny any Illinois dia manao izany ianao.
alaivo ny fangatahanao Exhibit sy ny dika mitovy amin'ilay fampiharana avy amin'ny fanjakana
mijanona ho tony na dia diso fanantenana tanteraka noho ny fangatahana hafahafa sy / na fepetra takiana
vakio amin'ny antsipiriany fatratra ilay fampiharana, izay natolotrao ho an'ny fampirantianao ary ilay fampandrenesana 10 andro tsara.
Raha mila hevitra na fanampiana faharoa ianao dia mifandraisa aminay.
Tokony ho fantatrao tsara ny fomba hamaliana ny dingana 1-6
manaova valiny amin'ny antsipiriany ny valin'ny fangatahana.
anjaranao amin'ny fomba tsara
endrika endrika fananana ho an'ny valin-teninao
mivavaha maromaro amin'ny anaram-piangonana maro hanitarana ny karamanao
araho ny valin-teninao amin'ireo manampahefana
manolora fiaraha-miasa ary mifalia fa ara-dalàna izany amin'ny fanjakanao.
Raiso mivantana eo amin'ny Fanamarihanao ny fahaizan'ny Fifanomezana Naming
Aseho, asio lohateny ny antontan-taratasy hoe "Fampirantiana [taratasin'ny fampirantiana] _ [Organisation FEIN Number or Organization Name] _Deficiency_ [Region ID (s) nosarahin'ny underscores]."
Rakitra ohatra momba ny Fifanomezana anarana: Exhibit N_81-3780373-Deficiency_1_4_10_17
Andiana fanamarihana 10 andro ao amin'ny YouTube sy Podcast
Inona daholo? Misaotra anao amin'ny fizarana miavaka iray, hiresaka momba ny fanamarihana 10 andro izahay rehetra. Ary raha mifikitra mandrapahatongan'ny farany ianao dia hianatra zavatra mety hampihorohoro anao, indrindra raha mpangataka vola ara-tsosialy ianao amin'ny fananana marijuana ambany kely izay nosamborina tamina fizarana iray tena manokana. Ka sidina 10 andro no misidina. Fanamarihana 10 andro be dia be no hita eo izao. Ary amin'izao fotoana izao dia mahazo ilay fampiratiana p izany ny fizarazarana ara-tsosialy 10 andro. Ka hiresaka momba ny fanamarihana ara-tsosialy 10 andro ny resaka ara-tsosialy indray izahay, raha manana fanontaniana momba ny fampandrenesana 10 andro voarainao ianao dia afaka jerenao ny adiresy mailaka eo. Ary mba hahafahanao mandefa mailaka amiko ao amin'ny toera-piantohana. Na dia tsy manampy aza aho dia mety afaka manome fotoana kely fonosana ho anao mba hahafahanao mampiasa ny fanafihana 10 andro anao, azonao atao ny mampiasa fanafihana etsy ambony mba hahazoana antoka fa Oh, tsara izany hemp.
Eny, tsy malahelo aho. Manamarika ny momba ny 10 andro na iza na iza, ny ekipako, ny sasany amin'izy ireo dia nahazo azy ireo ary nikarakara azy ireo izahay. Ary amin'izao fotoana izao dia hiresaka momba izay ataonao ianao aorian'ny nahazoanao iray amin'ireo fampandrenesana 10 andro ireo satria mety hahazo iray ny ekipanao raha tsy hoe nanao ny zava-drehetra majika tanteraka ianao. Ary ny tsikaritra 10 andro farany hitantsika ary mbola manidina izy ireo izao. Nisy olona nanatona ahy androany nilaza fa nahazo iray izy ireo omaly. Ary izany dia mitondra antsika amin'ny teboka voalohany amin'ireto fampandrenesana 10 andro ireto, mampandamina azy ireo. Tsara izany, noho izany dia mahazo fampandrenesana 10 andro avy amin'ny fanjakana ianao, ho tonga amin'ny mailaka io, hanatona anao ary handeha amin'ny fifandraisana faharoa. Ary noho izany ny fifandraisanao faharoa ary ianao dia hanomboka hamerimberina miditra amin'ny mpifaninana aminao. Ary avy eo dia manao kalandrie ianao amin'ny fotoana tokony hahatongavany. Ary apetrakao ao amin'ny kalandrianao, ny Kalandrie Google-nao, zavatra nametraka fampahatsiahivana fa aza atao amin'ny daty, rangahy. Ary ny fomba nanoratana azy rehetra dia ianao manana 10 andro manomboka rahampitso. Ka raha mahazo izao ianao izao, toa ny fantatrao, tonga tao anaty boaty mailakao fotsiny izany satria KPMG tamin'ny fahendreny tsy manam-petra dia nilaza hoe, Hey, rangahy, zavatra iray izahay. Eny ary, ianao dia mandahatra 10 andro manomboka ny andro taorian'ny nandraisany azy. Mariho, mazava ho azy ho an'i Illinois, raha toa tsy mitovy ny fanamarihanao 10 andro, izaho, fantatrao indray, dia mandefa mailaka amiko eo.
Ary avy eo isika dia afaka miresaka momba ny fanamarihanao 10 andro na izay karazana ataon'ny fanjakanao, mety tsy 10 andro izany, tsy azoko antoka fa mbola tsy fahampiana io, misy zavatra tsy ampy amin'ny fangatahanao. Rehefa avy nanao kalandrie ianao dia nahamarika ny 10 andro anao ary nanao hyperventilation kely ianao, dia tena mila mihady ao anatiny ianao ary mamaky azy. Satria ny KPMG dia tena manokana momba ny fomba tian'izy ireo titre momba ny fomba tian'izy ireo, apetraka ary araho izany. Ary araho ny fitsipika rehetra amin'ny tsara indrindra azonao atao amin'ny famoronana endrika ny valin-teninao. Avy eo, rehefa hitanao ny fomba hanaovanao ny lohanao araka ny tokony ho izy ny valinteninao, dia zahao ilay boaty ankehitriny fa miroso amin'ny fampahalalana manaraka ianao amin'ny fampandrenesana 10 andro, ary toy ny nolazaiko fa ny fampiratiana p dia ny fampirantiana ny ara-tsosialy ny vanim-potoana fangatahana Illinois tato ho ato ho an'ny dispensaries dia heveriko fa ireo dia hipoitra ihany koa afaka volana vitsivitsy aorian'ny hanombohany ny naoty ireo mpamboly sy ireo mpampiditra ary ireo mpitatitra. Te-hisaotra ireo tiako amin'ny ONC fotsiny aho, Tsia, tsy mpanohana izy ireo, fa efa teo aho. Mahafinaritra.
Ary izao dia manomboka mamaky ny fampandrenesana 10 andro ianao ary ny iray amin'ireo zavatra halako momba ireo fanamarihana 10 andro ireo dia voasoratra ao anaty fepetra izany ary misy fepetra arakaraky ny fepetra tsy azonao io ary atsofohy na tsy azonao io ary atsofohy na tsy ampy an'ity ianao dia fantatrao fa ataonao aorian'ny itiavanao ny ezaka na dia miresaka anao aza miverina eo amin'ny toeranao. Manomboka hyperventilation kely ianao. Oh, tiako ny ara-dalàna. Manaraka ny lalànanao hatrany izany. Satria tena zava-dehibe ny fanarahanay ny lalàna ary azon'izy ireo atao ny miaro ny fanovana. Ka izao ianao dia nijery ny fanamarihanao 10 andro izay milaza fa Mety ity na mety ho io, na mety ho ity, niroboka tao anaty fampirantiana izay tena itarainany. Ary avy eo jereo. Ary avy eo mazava ho azy, nahazo ny zavatra faharoa izahay dia mahazo ilay fampirantiana ianao, ary avy eo azonao ilay fangatahana.
Ary mamaky manokana ianao. Ary manokana, inona marina no mety tsy hita - mahazo mailaka foana amiko, farafaharatsiny mba omeo bonus izahay. Na afaka manampy anao hamaly izany aho ary handrafitra valiny ary ho tahaka ny, Oh, ity no banga tsy hitanao. Aza adino izany. Ary rahoviana, amin'ny manaraka, angamba afaka manampy anao amin'ny fangatahanao manontolo aho, milaza fotsiny. Ary noho izany aorian'ny namakianao azy ireo, ary hitanao hoe inona manokana, tsy hita izy ireo, ohatra, ho fampirantiana p, oh, tsy ananako izao. Ary raha mandeha ianao ary mamaky fampirantiana p, fampirantiana ny fananana ara-tsosialy. Misy doka ao anatiny ary misy be, koa misaotra anao nifikitra. Handre ny tena majika ve ianao izao? Misy doka ao amin'ny Exhibit B, ary ao amin'ny bold sy izany ary amin'ny bold. Homena anao ny fahitana ny valiny mety amin'izany. Ary mazava ho azy,
Tsy miresaka olona manokana aho. Saingy ny zavatra hitako momba ny fanamarihana 10 andro dia misy antony, mitovy daholo izy ireo. Matetika tsy ny tiako holazaina dia samy hafa izy ireo. Saingy ny olona dia mahazo karazana fanamarihana 10 andro mitovy amin'ny fanjakana. Ka ekipa maro no samy nanao fahadisoana mitovy na be dia be ny ekipa tsy nahita an'io fampahalalana io.
Ary izao indray, raha manana fanontaniana ianao dia azonao atao ny mandefa mailaka amiko ao amin'ny tranokala azo antoka Tom. Ankehitriny dia hiresaka zavatra iray izay tena mampatahotra tokoa isika, ary tena mampatahotra tokoa satria ampifanarahana amin'ny fitoviana ara-tsosialy izay mety hampiharina na tsia ary tsy azoko antoka hoe ahoana no hidinan'io. Ary heveriko fa mety hamorona fitoriana izany fa ho avy ny fitoriana ary ho tonga haingana ny fitoriana satria efa nanomboka aho. Izany no mitranga rehefa manana isa mifaninana amin'ny KPMG ianao ary misy ny lesoka ary ny karazan-javatra rehetra. Na dia mandresy aza ianao dia miomàna hitory satria misy mieritreritra fa izy ireo, misy mieritreritra fa tokony nokapohiny ianao.
Eny ary, andao horaisina, ohatra, ny fisamborana ny ara-tsosialy ho an'ny rongony. dimy grama, ndao lazaina hoe 2008. Fiatoana bevohoka io mba hisotroana kafe amin'ny tongotro. Ka noho izany dia voasambotra ianao noho ny rongony tany Illinois tamin'ny taona 2008 noho ny grama dimy. Ary tamin'ny taona 2016 tany Illinois, fahendrena tsy manam-petra, namoaka rongony 10 grama na latsaka izy ireo. Ary ny fomba hanoratana ny lalàna mifehy ny rongony sy ny lalàna momba ny hetra. Fandikan-dalàna azo ekena amin'ny famoahana azy io. Ka hatramin'ny 2016 dia mbola tsy nisy ny fandikan-dalàna mendrika alefa amin'ny fananana rongony 10 grama na latsaka. Na izany aza, nomena tapakila ianao. Tsy voasambotra ianao. Teny nalaina io. Fantatrao fa sazy izany raha tratra 10 grama na latsaka ianao taorian'ny 2016 tany Illinois. Tsy nandeha tamin'ny firaketanao izany. Raha voasambotra dimy grama ianao tamin'ny 2008, dia voasambotra ianao. Nanana datin'ny fitsarana ianao, angamba tsy maintsy nipetraka tamin'ny famandrihana afovoany vetivety ianao. Azonao atao ny mahazo izay sazy, ny sazy 10 grama na latsaka dia tsy maintsy jereko indray, ilay mpisolovava sy mpanolotsaina. Tsy mpisolovava mpanao heloka bevava amin'ny endriny aho. Aza mahalala na inona na inona momba ny fisaraham-panambadiana na ny lalànan'ny fianakaviana. Ka inona no mitranga amin'ilay olona nosamborina sy nohelohina 2008 grama tamin'ny 2016? Moa ve izany fandikan-dalàna azo ekena amin'ny famoahana? Eo ambanin'ny lalàna vaovao? Wicket sarotra io, satria ny fihetsika XNUMX momba ny fanakanana ny heloka bevava dia tsy niteraka fandoavana fiara. Ho an'ny olona rehetra izay efa voasambotra teo aloha, dia namorona fanondranana fiara ho an'ny olona izay hahazo ny tapakila Aorian'izay, ka toy ny hoe hivoaka avy ao amin'ny firaketanao ny tapakila, azafady.
Izay ny hevitro. Ary izany no iray amin'ireo fepetra fanitsiana an'ny CRTA ary avy eo, ity andalana ity, oh tsia, vonona ny hanova ny pejy matematika aho, ny olona dia mahery setra fotsiny. 300. Raha ny marina dia pejy 300 amin'ny fanitsiana. Ary noho izany ny lalàna tena izy dia nanana ireo fanitsiana hafa rehetra ireo, ary avy eo dia niresaka ireo faritra ireo. Ary noho izany dia mila mijery azy ianao. Ary izany dia ho fanontaniana mahaliana. Fantatrao, ohatrinona ny ahi-dratsy ary oviana ianao no nosamborina dia zavatra tsy maintsy anontanianao ny talenta ara-tsosialy eo amin'ny ekipanao? Satria raha latsaky ny 10 grama izany dia mety tsy ho ampy izany, na dia tsy tamin'ny 2007 aza. Ary raha mihoatra ny 500 grama dia be loatra, izay hafahafa, mahasosotra, ny karazan-javatra rehetra. Ary o, milamina io. Nisy nametraka fanontaniana fotsiny tamiko tamin'ny tena izy, ary nanjavona avy eo. Misaotra Facebook fa tsy nanampy ahy loatra. Eo ianao. Tsia, nitovy tamin'ny, Na izany na tsy izany, misaotra, shales. Ary raha manana fanontaniana momba ny fijerijery eleven ianareo, mandrosoa manontany azy ireo dieny izao. Ary izy ireo dia karazana miara-mivory ao an-tokotaninay izay ampiasainay. Teknolojia kely mahafinaritra io. Betsaka ny olona mampiasa azy io ankehitriny. Mihaino ny maty aho. raha ny marina dia mihaino ireo Maty Misaotra. Ny Maty dia nofo nofo hafa amin'ny maty.
. Ary tsy izany ihany, dia fanoharana amin'ny andro firy miandry antsika. Toy ny efa nolazaiko dia nisy olona nifandray tamiko androany izay nilaza fa nahazo fampandrenesana 10 andro fotsiny izy ireo. Ka any isika no mandeha. Tonga amin'ny volana Jona isika izao, satria tsy maintsy izy, um, tsia, afaka 10 andro manomboka rahampitso, satria izany no fomba nanoratana ireo fanamarihana ireo. Ka raha hanoherana an'ity fampandrenesana 10 andro voaraiko androany ity aho, dia tokony ho amin'ny volana Jona 1. Ary noho izany dia tonga amin'ny volana Jona isika miaraka amin'ny fampandrenesana 10 andro. Miala tsiny, ralehilahy, fa izany no fandehany ankehitriny. Ary misaotra anao. Misaotra anao handray. crypto Roger, miresaka momba ny fanamarihana 10 andro any Illinois matetika izahay. Nanana fidirana an-tsehatra fohy ihany koa izahay izay niresahanay ny volavolan-dalàna natolotr'i Pennsylvania fa manana lalàna izy ireo ary manana volavolan-dalàna izay mbola tsy nifidianan'izy ireo ary nandany azy ary nanao sonia azy io ho lalàna. Ka ho avy ny Facebook See, iray hafa izao. Eny ary, tsy misy resaka momba ny lohahevitra ary valio ry zalahy. Handeha hahazo kely fotsiny isika noho izany ary ny fandefasana rongony rongony izay tsy dia hitranga ilay volavolan-dalàna fa misy volavolan-dalàna any Illinois. Fepetra takiana amin'ny CRTA ny lalàna mifehy ny rongony sy ny lalàna momba ny hetra alefa. Izy io dia mifamatotra amin'ny lisansa dispensary.
FIFAMPIANARANA NY BAIBOLY DIDINY 10-ANDRIAMANITRA
Eny, mila miverina miasa aho. Saingy indraindray tiako ny maka aina toy izao ary mirakitra horonantsary fanamarihana 10 andro hahafahanay manampy anao mamaly azy ireo. Raha manana fanontaniana indray ianao, dia asio azafady azafady, misy ny collateral base.com no orinasako ho toy ny antoka fototra, ny bilaogiko momba ny hazo rongony rehetra, lalàna, mazava ho azy, ny fanaovan-dalàna rongony, bilaogim-baovao, izany no fampisehoana, lozisialy indostrian'ny rongony.com any no ahitanao ny fanontaniana sy valiny rehetra ilainao momba ny indostrian'ny rongony ara-dalàna, ao anatin'izany ny fanamarihana 10 andro eo ho eo izay hofonosiko izao, dia halefanay ity amin'ny pejy amin'ity tranonkala ity momba ny fomba hamaliana ny fanamarihana 10 andro. Mandrapihaona indray amin'ny manaraka